Global Voices teny Malagasy · 21 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 21 Janoary 2019
Ejipta21 Janoary 2019
Syria: Sazy telo taona an-tranomaizina ho an'ilay bilaogera, Tariq Baiasi
Syria21 Janoary 2019
Ny Alahady 11-5-2008, nanambara ny didim-pitsarany ho an'ilay bilaogera Syriana, Tariq Baiasi efa nogadraina hatramin'ny 7-7-2007 ny Fitsarana misahana ny Fiarovam-pirenen'i Damaskaosy.
Malezia21 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nohadihadian'ny polisy momba ny hirany rap, izay nanasongadina ny hiram-pirenena Maleziana “Negaraku”, tao amin'ny feo lafika i Wee Meng Chee, fantatra amin'ny anarana hoe Namewee. Niteraka resabe tamin'ny taon-dasa (2007) ity hira ity izay mitondra ny lohateny hoe ‘Negarakuku’,...
Shina: Bilaogera ara-politika nosamborina, nalaina ny solosainany
Noraofina tamin'ny faran'ny herinandro teo ny solosain'i Guo Quan, mpiara-manorina ny antoko mpampiasa aterineto ao Shina sady mpisolovava tamin'ny raharaha fitoriana an'ny Yahoo! vao haingana ary efa nahavita dimy andro amin'ny folo andro higadrana azy izy.
Ejipta: Atahorana ho ampijaliana ilay bilaogera Ahmed Abou Doma nogadraina
Nisy ny tatitra nalefa tany amin'ny Mpampanoa lalàna Ejypsiana milaza fa niharan'ny herisetra ilay bilaogera notazonin'ny polisy, Ahmed Abou Doma.
Ejipta: Voasakana ny tranonkalan'ny mpanohitra sangany
(Marihina fa tamin'ny volana May 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Araka ny tatitry ny Tambajotra Arabo misahana ny Vaovaon'ny Zon'olombelona dia nakaton'ny mpanome tolotra Aterineto, TE Data , mpanome tolotra lehibe indrindra any Ejipta izay an'ny governemanta nanomboka ny 4 Mey 2008 ny tranokalan'ny Hetsika Ejiptiana ho an'ny Fanovana –...
Tonizia21 Janoary 2019
Emirà Arabo Mitambatra21 Janoary 2019